Checker 🥇 Emulator.online ▷🥇
အမျိုးသမီးများ။ရည်ရွယ်ချက်မှာပြိုင်ဘက်၏အပိုင်းအစများကိုဖမ်းရန်သို့မဟုတ်လေဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဘက်၏အပိုင်းအစတစ်ခုစီကိုစားရန်စီမံသူသည်ကစားပွဲကိုအနိုင်ရရှိသည်။ ကျနော်တို့ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုပါ အကောင်းဆုံးကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်လူသိများနှင့်ကစားခဲ့သည်။
Checkers ၏ဂိမ်းသည်စတုရန်းဘုတ်အဖွဲ့တွင်ကစားသူနှစ် ဦး အကြား၊ အဖြူ ၁၂ နှင့်အနက်ရောင်အပိုင်းအစများပါ ၀ င်ပြီးအလင်းရောင်နှင့်အမှောင်ခြောက်ထပ်ရှိသည့်ရင်ပြင်များတွင်ကစားသည်။
အွန်လိုင်းအခမဲ့ Checker များကိုဆော့ရန်, သင်ရုံရှိသည် ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဆက်လက်:
သင်ဆိုက်ထဲဝင်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်သာလုပ်သင့်သည် play ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော configuration ကိုစတင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်ကစားခြင်းကိုသင်ရွေးနိုင်ပြီး၎င်းကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်နိုင်သည်။
ယခုသင်အသုံးဝင်သောခလုတ်အချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ လုပ်နိုင်အသံထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း "ခလုတ်ကိုပေးပါကစား"ပြီးတော့ကစားနိုင်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ်"ခေတ္တရပ်နားသည်"ထိုအခါ"ပြန်လည်စတင်ပါ"အချိန်မရွေး။
Checker ဂိမ်း: အင်္ဂါရပ်များ
"Damas"ရာစုနှစ်များစွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့ကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကစားနည်းကိုတစ်ခြားစီအလောင်းအစားလုပ်ပြီးပြိုင်ဘက်ထံမှအပိုင်းပိုင်းယူနိုင်သည်။ ပြိုင်ဘက်သည်အပိုင်းပိုင်းမရှိတော့သောအခါသို့မဟုတ်ရွေ့လျားသွားသောကြောင့်၎င်းသည်ရွေ့။ မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အခါသင်အနိုင်ရရှိသည်။
"အမျိုးသမီးများ" ၏ရည်မှန်းချက်မှာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုပိတ်ဆို့ သို့မဟုတ်သူအပိုင်းအစများစွာကိုယူသွားပါ၊ သို့မှသာသူသည်ရွေ့လျားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ6နှစ်ပေါင်းထံမှ
အနက်ရောင်အပိုင်းပိုင်း ၁၂ ခု
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌မည်သည့်လမ်း၌စတင်ခဲ့သည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိပါသို့သော်သေချာသည်မှာ Ladies သည်ကာလကြာရှည်တည်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ပလေတို သူကအီဂျစ်နိုင်ငံကဂရိကိုငှားခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့သူလိမ်ပြောခဲ့တယ်။
ပထမသီအိုရီမှာ Checkers of Oldest version သည်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်တွေ့ရှိသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဥ၊ အီရတ်။ ကာဗွန်ချိန်းတွေ့ကြောင်းဖော်ပြသည် ဂိမ်းပြီးသားဘီစီသုံးထောင်ပတ်ပတ်လည်တည်ရှိ။
အီဂျစ်အဟောင်းတွင်ဂိမ်းတစ်ခုခေါ်သည် အရက်, 5X5 ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအသုံးပြုသော, ထိုအချိန်ကကျယ်ပြန့်ကစားခဲ့စစ်ဆေးမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သမိုင်းပညာရှင်မှ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုခြေရာခံ ဘီစီ ၁၄၀၀ ပြီးတော့သူတို့လူကြိုက်များမှုကအရမ်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ် ၎င်းသည်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာကျော်ကအနောက်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်ကစားခဲ့သည်။
ပတ်ပတ်လည် အေဒီ ၁၁၀၀ပြင်သစ်လူမျိုးတစ် ဦး သည်စစ်တုရင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းစီတွင်နံပါတ် ၁၂ ခုအထိတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီမူကွဲအသစ်ကိုFierges"အိုရေ"Ferses".
ရှေးအကျဆုံးအပြောင်းအလဲကိုအမျိုးသမီးများအတွက်လူမှုရေးဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Le Jeu Plaisant De Dames (The Pleasant of the Checkers of the Game) ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ်မှသတ်မှတ်ထားသော Checker ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရဂိမ်းကိုအင်္ဂလန်နှင့်အမေရိကသို့တင်ပို့သည်။ G. Brittany တွင်၎င်းသည်အမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ စာကြမ်းများ "နှင့်ကျော်ကြားသောသင်္ချာပညာရှင် ဝီလျံ Payne တဆယ်ခုနစ်ငါးဆယ်ခြောက်အတွက်လောင်းကစားအပေါ်သူ၏ကျမ်းရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်များတစ်လျှောက်ဒမာ့စ်သည်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိသောကစားသမားများအတွက်လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်ချက် ၂ ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားကစားပွဲကိုကျပန်းနည်းဖြင့်စတင်ရန်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ချန်ပီယံဆုအတွက်လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်ချက် ၃ ခုအထိရှိသည်။
ကွန်ပြူတာများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ရှိနေသော်လည်းတောက်ပနေသည် အလန်ကျူရင် Ladies များအတွက်အခြေခံပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည် (စက္ကူပေါ်တွင်တွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် (စက်များသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးသောကြောင့်) ။
နောက်ဆုံးတော့ 1952 ၎င်းသည်ကစားပွဲ၏ရောင်စုံသမိုင်းတွင်ထူးခြားသည့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည် အာသာအယ်လ်ရှမွေလ ကိုကို ကွန်ပျူတာကအသုံးပြုပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေး program ကို။ ကွန်ပျူတာများ၏အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းရည်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဤဂိမ်းအစီအစဉ်များသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် Jonathan Schaeffer ဦး ဆောင်သောအယ်လ်ဘာတာတက္ကသိုလ်မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်သူတို့ကကြွက်များဂိမ်းကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
program ကို ချင်းတွင်း တစ်ခုလုံးမှတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်မတူကွဲပြားကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသင်းသည် Checkers သည်သရေကျသည့်ကစားနည်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်၊ အကယ်၍ ပြိုင်ဘက်နှစ် ဦး လုံးမှမှန်ကန်သောရွေ့လျားမှုကိုပြုလုပ်မည်ဆိုပါကအမြဲတမ်းသရေကျခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်.
သို့သော်ဂိမ်းသည်၎င်း၏ကျော်ကြားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများသည်ပျော်စရာကောင်းသောဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုကစားခြင်း၊ သူတို့၏ယုတ္တိဗေဒအတွေးအခေါ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားခြင်းတွင်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအချိန်အချို့ကိုသာရရှိကြသည်။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်အဖြူရောင်အပိုင်းအစများ၊ နောက်တစ်ခုစီကိုအနက်ရောင်အပိုင်းအစတစ်ခုစီရရှိသည်။ မည်သူကမည်သည့်အရောင်ကိုကစားသည်နှင့်ကစားသမား ၂ ယောက်သည်၎င်းတို့အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထို့နောက်အပိုင်းအစများကိုဂိမ်းဘုတ်၏အစွန်းဆုံးတန်းများပေါ်တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ရသည်။
အပိုင်းပိုင်းသည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးအခြေအနေအားလုံးတွင်ထည့်သည် ရှေ့ဆက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လယ်ကွင်း Oblique ဦး တည်ချက်။ လယ်ပြင်၌ကျောက်တုံးတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင် (သို့) ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ၏ကျောက်တုံးသည်လယ်ပြင်၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသိမ်းပိုက်။ မရပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အနက်ရောင်စတုရန်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကျောက်တံတားနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောစတုရန်းတစ်ခုကိုဖြတ်လျှင်သင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကျောက်၏နောက်ကွယ်ရှိစတုရန်းအလွတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးရွေ့လျားမှုကိုကျော်သွားနိုင်သည်။ သငျသညျဆန့်ကျင်အပိုင်းပိုင်းအပေါ်ခုန်ပြီးတော့သင်ဂိမ်းထဲကသူတို့ကိုယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းခုန်တားမြစ်သည်။ မင်းပြန်လှည့်လို့မရဘူး ထိုမိန်းမနှင့်မှလွဲ။ ။
သင်ရောက်ရှိလျှင် သင်၏ကျောက်နှင့်ပြိုင်ဘက်ထိပ်တန်းအဆိုပါ ကစားသမားတစ် ဦး ဘုရင်မလက်ခံရရှိသည် အဘယ်သူသည်လာမည့်အလှည့်၌ဤအခြေအနေကနေပြုမူနိုင်ပါတယ်။
La dama သတ်မှတ် အခြားအပေါ်2အပိုင်းပိုင်းတ ဦး တည်းအားမရ။ ဒီအဘို့အသင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် အပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီ ဂိမ်းကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်။
၎င်း၏အားသာချက်များကိုဖြစ်ကြသည် ရှေ့ကိုမျက်နှာပြုမူနိုင်ပြီးကျောထောက်နောက်ခံပြုနိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကြိုက်သလောက်နယ်ပယ်များစွာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင် (သို့) မျက်နှာနှစ်ဖက်ရွှေ့နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်အပိုင်းအစများကော်နေသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်။ ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်မိဖုရားအများဆုံးရရှိသည်။ သင်ဟာဂရုမစိုက်မှုကြောင့်ဘုရင်မကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလျှင်ဒုတိယအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရကောင်းရနိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအပြောင်းအရွေ့ကစားသမား
အဆိုပါဘုတ်ဂိမ်း "Daae" ဖြစ်ပါတယ် ၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာနှင့်နည်းဗျူဟာစွမ်းရည်ကိုအတွဲလိုက်စမ်းသပ်လိုသောကစားသမားများကိုရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်အသက်ခြောက် နှစ်မှစ၍ ရေပန်းစားသည်။
ဖြန့်ချိသူနှင့်မူကွဲပေါ် မူတည်၍ "Dame" သည်အကြားပြောင်းလဲသည် ယူရိုဆယ် ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းများအတွက်နှင့် 63 ယူရို အလွန်မြင့်မြတ်သောမော်ဒယ်များသည်။
ရထားကိုပညာရှိစွာစတင်နိုင်ရန်အတွက်နည်းဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြိုတင်တွေးတောဆင်ခြင်မှုစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ပွားယူနိုင်သည်ဆိုလျှင်လည်းသင်မှကူးထည့်နိုင်သည် တစ်ဖက်မှတစ်ဖက် .
မိဖုရားဖမ်းမိသည်ဘုရင်မကြီးသည်လမ်းထောင့်ရှိမည်သည့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ကိုမှမပါဘဲသူမလိုချင်သောနေရာလွတ်များကိုဖြတ်ကျော်သည်၊ ရှေ့သို့မျက်နှာမူ။ နောက်ပြန်လှည့်နေသည်။ ထောင့်ဖြတ်လမ်းကြောင်းဖြင့်ရွေ့လျားနေပြီးထိုထောင့်ဖြတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
မိဖုရားဖမ်းမိသည်အကယ်၍ သင်၏ထောင့်ဖြတ်တွင်နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခု၊ ပြိုင်ဘက်၏သေံမှုရှိလျှင်၊ ပြိုင်ဘက်၏အပိုင်းအစနောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအချည်းနှီးသောရင်ပြင်များရှိမှသာဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိဖုရားဖမ်းမိအပိုင်းအစပြီးနောက် site တစ်ခုဆက်လက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်နာမည်အကြီးဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သည့်စစ်တုရင်၊ ကြက်နှင့်ဂိမ်းများဖြစ်သည် ဒိုမီနို.
တရုတ်စစ်ဆေးသူများသည် ၆ ချက်ပါသောကြယ်တစ်လုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားကာဇယားကွက်တစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မျဉ်းကြောင်းများဖြတ်သောနေရာတွင်အချက်များမှာ၊ ချစ်ပ်များကိုနေရာချသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကြယ်ပွင့်၏အမှတ်အသားနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် tiles ၁၅ လုံးကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရွှေ့ပါ။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဖြစ်နိုင်လျှင်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုမယူလျှင်၎င်းတို့သည်ဂိမ်းကိုရှုံးသည်။
အတိအကျ, အစဉ်အလာအုပ်ကြွပ်ကဲ့သို့တူညီသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို, ကစားသမားသည်မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို လိုက်၍ ရွေးစရာမလိုဘဲအကောင်းဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သာမန်အပိုင်းတစ်ခုထက်မိဖုရားတစ် ဦး ၏တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်မှာမျက်နှာကိုနောက်ဖက်နှင့်ရှေ့သို့ချီ။ ဖမ်းယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒိုင်ခွက်ကိုသုံးပါ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်။ ကစားသမားတစ် ဦး စီသည်အပိုင်းပိုင်းဆယ့်ခြောက်ချက်ရှိပြီး၎င်းတို့နှင့်အနီးဆုံးဒုတိယနှင့်တတိယတန်းများတွင်ကန ဦး ထည့်သည်။
အပိုင်းပိုင်းရွေ့ orthogonally, ဘေးတိုက်သို့မဟုတ်ရှေ့ဆက် facing ပေမယ့်နောက်ပြန်မရင်ဆိုင်ရပါ။
ဖမ်းမိသောမျက်နှာကိုလည်းရှေ့သို့မျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုရင်ဆိုင်ရသည်။ ဖမ်းမိသောအပိုင်းအစရရှိသွားတဲ့ ကွမ်းခြံကုန်း ယခင်ကဖမ်းမိအပိုင်းအစကသိမ်းပိုက်တရန်, (ချက်ချင်းရဲ့အဆုံးမှာလှုပ်ရှားမှုတစ်လျှောက်လုံးမဟုတ်ဘဲလှုပ်ရှားမှုတစ်လျှောက်လုံး) နှိမ်နင်းသော။
တရားဝင်ဂိမ်းထဲမှာရှိပေမယ့်ဒီအပြောင်းအလဲအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတိအကျတူညီသောအတွက်အပြောင်းအလဲ, အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားသောသူသည်နိုင်၏။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကစားသမားသည်သူ၏အပိုင်းအစများကိုပြိုင်ဘက်အားအမြန်ဆုံးပေးရမည်။
တရားဝင် Ladies စည်းမျဉ်း
Ladies တစ်စိတ်ပိုင်းအားကစားဖြစ်ပါတယ် လူနှစ် ဦး အကြားကစားခဲ့သည်။
3. Checkers ၏ဂိမ်း ကစတုရန်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကစားသည်, 100 တန်းတူရင်ပြင်, တနည်းအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်သို့ခွဲခြား။
မှောင်မိုက်ရင်ပြင်များမှဖွဲ့စည်းထားသော Oblique လိုင်းများသည်စုစုပေါင်း ၁၇ လုံးရှိသည့်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းစည်းများဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းအရှည်ဆုံး ၁၀ လုံးနှင့်ထောင့်နှစ်ထောင့်ပေါင်းစပ်မှုအားစုစုပေါင်းအရှည်ဆုံးဟုခေါ်သည်။ ထောင့်ဖြတ်ကြီးမား.
အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ကစားသမားများအကြားထားရှိဖြစ်ပါတယ်, ကြီးမားတဲ့ထောင့်ဖြတ်ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘယ်ဘက်မှစတင်သည်, ဒါကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘယ်ဘက်မှပထမ ဦး ဆုံးစတုရန်းမှောင်မိုက်သည်။
4. အရှင်နေရာချဘုတ်အဖွဲ့ရှိပါတယ် အောက်ပါအမည်များ:
ဟင်းလျာများ:5မှောင်မိုက်ရင်ပြင်နှင့်အတူအလျားလိုက်လိုင်း။
ကော်လံများ5မှောင်မိုက်ရင်ပြင်နှင့်အတူဒေါင်လိုက်လိုင်း။
၅ ။ အမှောင်သေတ္တာများသည်နည်းဗျူဟာ ၁ မှ ၅၀ အထိနည်းပါးသည် (Manoury သင်္ကေတ) ။ ဒီနံပါတ်ကိုဗန်းထဲ၌ပုံနှိပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ရှေ့မှောက်ဘုတ်ကိုကြည့်ခြင်း၊ သွယ်ဝိုက်သောနံပါတ်သည်ဘယ်ဘက်မှညာသို့စတင်သည်။ အပေါ်ဘက်ရှိပထမအမှောင်စတုရန်းပုံမှစတင်ပြီးအောက်ဘက်ရှိနောက်ဆုံးအမှောင်စတုရန်း (ပုံပုံ ၁) မှအဆုံးသတ်သည်။
အခြေစိုက်စခန်းသို့မဟုတ် coronation ပြားပေါ်ရှိမှောင်မိုက်အိမ်များငါးများ၏နံပါတ်များကိုလက်ခံရရှိသည် 1 မှ5နှင့် 46 မှ 50.
စားပွဲရှိအမှောင်သေတ္တာငါးခုသို့မဟုတ်ပထမနှင့်နောက်ဆုံးကော်လံများတွင်နံပါတ်များဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ထားသည် ဘယ်ဘက်တွင် ၆၊ ၁၆၊ ၂၆၊ ၃၆ နှင့် ၄၆ နှင့်ညာဘက်နံပါတ် ၅၊ ၁၅၊ ၂၅၊ ၃၅ နှင့် ၄၅ တို့ဖြစ်သည်.
၆။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Checkers ဂိမ်းသည်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းသောကျောက်ခဲ ၂၀ ဖြင့်ကစားသည် 20 အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ကျောက်ခဲတို့ကို။
၇။ ပွဲမစခင်၊ ၁ မှ ၂၀ အထိရင်ဖြူများဖြင့်ကျောက်တုံး ၂၀ သည် ၃၁ မှ ၅၀ အထိအဖြူရောင်ကျောက်တုံးများရှိသည်။ ၂၁ ကနေ ၃၀ ကြားရင်ပြင်ကလွတ်လိမ့်မယ် (ပုံ ၂) ။
၉။ ကျောက်တုံးဖြစ်စေ၊ မိဖုရားဖြစ်စေပေါ် မူတည်၍ အပိုင်းအစများသည်ရွေ့လျားပြီးမတူကွဲပြားသောပုံသဏ္takeာန်များကိုရယူသည်။ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သို့အခန်းတစ်ခန်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုခေါ်သည်။ပေးကမ်း".
၁၀။ ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းသည်အမြဲတမ်းလူဖြူမောင်းသူ၏အစပျိုးမှုဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းအစများဖြင့်တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်စီကစားသည်။
၁၁ ကျောက်သည်တိုးတက်၏။ ထောင့်ဖြတ်အတွက်နောက်တစ်လမ်းသွားတွင်ရှိသောအိမ်မှကျန်သည့်အိမ်မှ။
၁၂။ သရဖူ၏သရဖူကိုရောက်ရှိပြီးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆုံးမှာအဲဒီမှာကျန်ရှိနေသောကျောက်ကိုမိဖုရားအဖြစ်မြှင့်တင်သည်။ ကျောက်၏ coronation အဆိုပါအားဖြင့်မှတ်သားထားသည် တူညီတဲ့အရောင်အခြားကျောက်ထပ်။
၁၃။ ပြိုင်ဘက်ကိုထောက်ခံရန်အကြံပြုသည် ဒီ coronation အကောင်အထည်ဖော်။
14. အမျိုးသမီးများမောင်းနှင်သောကျောက်သည်ထိုအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည် သရဖူခံခြင်းမရှိဘဲမလှုပ်ရှားနိုင်ပါ
၁၆။ မိဖုရားသည်သူမလွတ်မြောက်သည့်နေရာတွင်သူမနေထိုင်သောထောင့်ဖြတ်လမ်းကိုတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်၊ သူမထားရှိသည့်အိမ်မှအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။
အကယ်၍ ထိမိသောသို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောကျောက်ကိုမဖြန့်ဖြူးသေးလျှင်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုအခြားအိမ်တွင်ထားရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုမှန်ကန်စွာနေရာချလိုသောပြောင်းရွှေ့ကစားသမားသည် AJEITO ဟူသောအသုံးအနှုန်းဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှောင်ရမည်။
၁၇ ။ အပြည့်အဝရိုက်ချက်ကိုကစားသောတစ်ခုတည်းခြေကုပ်အဖြစ်မှတ်သည် တားမြစ်သည် အပိုင်းပိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့သယ်။
၁၈။ အကယ်၍ ကျောက်တုံးသည်ထောင့်မှန်အတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ပါက၎င်းနောက်တူညီသောထောင့်ဖြတ်နေရာတွင်အချည်းနှီးသောစတုရန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ အဆိုပါအပိုင်းအစခုန်နှင့်အခမဲ့စတုရန်းသိမ်းပိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်အပိုင်းအစဘုတ်အဖွဲ့မှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည် ရှေ့ဆက်သို့မဟုတ်နောက်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောဤပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်မှုသည်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရိုက်ချက်ဖြစ်သည်။
မိဖုရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်းအခြားတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနီးကပ်စွာသို့မဟုတ်ဝေးကွာနေသည့်တူညီသောထောင့်ဖြတ်နေရာတွင်ရှိနေပြီးဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်း၏နောက်တွင်အနည်းဆုံးအချည်းနှီးသောစတုရန်းတစ်ခုရှိနေလျှင်၊ မိဖုရားသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်းအစကိုဖြတ်ကျော်။ အပိုင်းအစပြီးနောက်မည်သည့်နေရာလွတ်ကိုမဆိုယူရမည်, သင့်ရွေးချယ်မှု။ ထိုစစ်ဆင်ရေးကိုအမျိုးသမီးကလုပ်ဆောင်သည်။
၂၀။ ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်။ ရိုက်ချက်၏ရှင်းလင်းသောအရိပ်အယောင်မရှိခြင်းသည်ပြိုင်ဘက်၏တောင်းဆိုချက်အရအမှားနှင့်တူညီသည်။ အရေပြားသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဖက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ဆေးကြောခြင်းကိုအပြီးသတ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။
၂၁။ သင်ဖမ်းမိသောကျောက်တုံးသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အပိုင်းအစနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါ၊ နောက်စတုတ္ထနေရာလွတ်ရှိသည်။ နောက်အပိုင်းသည်နောက်ဆုံးအပိုင်းပြီးနောက်နောက်ဆုံးတတိယနှင့်တတိယနေရာတွင်ခုန်ရလိမ့်မည်။ ရွှေ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိသည့်ပြိုင်ဘက်၏အပိုင်းအစများမှာရွေ့လျားမှုပြီးဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်သည်။ တက်သို့မဟုတ်ဆင်းနိုင်ရန်အတွက်ချက်ချင်းဘုတ်အဖွဲ့မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဤစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုံးကိုကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွင်းဆက်ရိုက်ချက်ဟုခေါ်သည်။
၂၂။ ပထမခုန်ပြီးနောက်တွင်မိဖုရားတစ်ပါးသည်အခြားဆန့်ကျင်ဘက်ကျောက်တုံးနှင့်အဝေးတစ်နေရာတွင်ရှိနေစဉ်သို့မဟုတ်အခြားအချည်းနှီးသောရင်ပြင်များနောက်တွင်ရှိနေစဉ်မိဖုရားသည်ဒုတိယအပိုင်းအစကိုဖြတ်ကျော်ရမည်။ တတိယနှင့်ဒါပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးဖမ်းမိအပိုင်းအစပြီးနောက်, သင့်ရွေးချယ်မှုမှာ, အခမဲ့အာကာသသိမ်းပိုက်။
၂၃။ ကွင်းဆက်ရိုက်ချက်တစ်ခုတွင်၎င်းအားတားမြစ်သည် အိမ်များ skip ။
၂၄။ ကွင်းဆက်ရိုက်ချက်တစ်ခုတွင်သင်ဗလာကျင်းနေသောနေရာကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော် ဆန့်ကျင်အပိုင်းအစသာတစ်ချိန်ကခုန်နိုင်ပါတယ်။
၂၅။ ကွင်းဆက်ရိုက်ချက်သည်နောက်ဆုံးစတုရန်းမတိုင်မီအထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွပ်မျက်ခံရရမည်။ ရိုက်ချက်၏ရှင်းလင်းသောအရိပ်အယောင်မရှိခြင်းသည်ပြိုင်ဘက်၏တောင်းဆိုချက်အရအမှားနှင့်တူညီသည်။
၂၆။ ကွင်းဆက်ရိုက်နေစဉ်အတွင်းအပိုင်းအစ၏ရွေ့လျားမှုကိုကစားသမားကအပြီးသတ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည် အဆိုပါအပိုင်းအစကျဆင်းသွားခဲ့သည်တစ်ခုခုကိုအဆုံးမှာဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုအလယ်၌ဖြစ်စေ။
၂၇။ ကွင်းဆက်ပစ်ခတ်မှုလုံးဝပြီးဆုံးသွားသောအခါယူထားသောအပိုင်းအစများကိုအကွက်မှဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ဖမ်းမိအပိုင်းပိုင်း သူတို့အဖြစ်မကြာမီလှုပ်ရှားမှုအဆုံးသတ်အဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်ပါသည် သူတို့ခုန်ချသည့်အတွက်တက်သို့မဟုတ်ဆင်းဆင်းနိုင်ရန်အတွက်,
၂၈။ အပိုင်းအစများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသည်ကစားသမားမှနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုယူသွားသည့်အခါ (သို့) မည်သည့်အချိန်တွင်ဖယ်ရှားသည်ကိုပြီးပြည့်စုံသည်ဟုသတ်မှတ်သည် စစ်ဆင်ရေးကွပ်မျက်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
၂၉။ ကွင်းဆက် socket တွင်ဖြစ်နိုင်သမျှများများယူခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသောအခါမိဖုရားသည်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှ ဦး စား ပေး၍ ချမှတ်ခြင်းမရှိပါ။ ရိုက်ချက်တွင်အမျိုးသမီးနှင့်ကျောက်တုံးသည်တန်းတူဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ယူမည့်အပိုင်းများသည်နည်းနှစ်နည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အရေအတွက်ပိုမိုများပြားပါကကစားသမားသည်ကျောက်တုံးနှင့်မိဖုရားတို့ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုတစ်ခုတည်း (သို့) မျိုးစုံရွေးချယ်နိုင်သည်။
31. အတည်ပြုသည် အပိုဒ် 3.5, ကွင်းဆက်ရိုက်ချက်အတွက်ကျောက်တုံးဆန့်ကျင်ဘက် coronation ဂဏန်း၏အိမ်များမှတဆင့်သာဖြတ်သန်းသောကျောက်, ဖမ်းယူ၏အဆုံးမှာဒါဟာနေဆဲကျောက်ဖြစ်သည်။
၃၂။ အကယ်၍ ကစားပွဲကာလအတွင်းပုဒ်မ ၂.၄ ကိုစဉ်း စား၍ ဘုတ်အဖွဲ့သည်မှားယွင်းစွာနေရာချထားကြောင်းတွေ့ရှိပါက၊ ဂိမ်းဖျက်သိမ်းနှင့်ပြန်လည်စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ ၂.၈ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များ ပွဲမစခင်အတည်ပြုရမည်။ ပွဲစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိရသောမည်သည့်ကွဲလွဲချက်များကိုမဆိုပုဒ်မ ၅.၄ အဖြစ်ဖြေရှင်းသည်။
၃၄။ မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောစတုရန်းတွင်ရှိသည့်မည်သည့်အရာမဆို (ပွင့်လင်းမြင်သာ) ၎င်းသည်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးအနေဖြင့်အချက် ၅.၄ အရလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည်.
၃၅။ ကစားသမားသည်အောက်ပါမမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါကပြိုင်ဘက်သာဖြစ်သည် သင့်အနေဖြင့်မူမမှန်မကန်မှုများကိုပြင်ဆင်သင့်၊ မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မူမမှန်မှုများ
၃၆ ။ ကစားပါ တတန်းနှစ်ခုလှုပ်ရှားမှုများကို။
39. နောက်တစ်ခုကိုပြန်သွားပါ ပြိုင်ပွဲပြီးပြီ.
41. ဘယ်အချိန်မှာအပိုင်းအစ Play ကဖမ်းယူဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
၄၅။ ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ကိုမမှန်မှန်ပုံထားပါ။ အဆိုပါ plug ကိုအဆုံးသတ်မီ။
49. ဖမ်းမိပြီးနောက်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ကိုဖယ်ရှားပါ.
မတော်တဆအကြောင်းပြချက်ကြောင့်၊ ကစားရာနေရာမှပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ထိုအချိန်ကစစ်ဆေးအတည်ပြုသောဤအချက်ကိုမူမမှန်မကန်ထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ မရပါ။
၅၁။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဂိမ်း၏တရားဝင်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ငြင်းဆန်လျှင်၊ ပြိုင်ဘက်ကပြenfor္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅၂. ကစားသမားတစ် ဦး ၏ပြိုင်ဘက်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုပြုလုပ်သောသို့မဟုတ်တရားဝင်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ငြင်းဆန်သောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမဆိုအခြေအနေကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ပြင်ဆင်ချက်ပိုင်ခွင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။
53. တစ် ဦး ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း မူမမှန်သို့မဟုတ်လွန်ကျူး။
၅၃။ တတိယအကြိမ်ထပ်တူအနေအထားကိုပြသခြင်းနှင့်ကစားသမားတစ် ဦး တည်းသာလှုပ်ရှားမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူသည့်အခါဂိမ်းကိုသရေပွဲအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
54. ဒါဟာစဉ်အတွင်းအတည်ပြုသည် လှုပ်ရှားမှု ၂၅ ခု၊ ကျောက်တုံးကိုရွေ့လျားခြင်းနှင့်မရွေ့စေဘဲ Checkers များသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အပိုင်း (၃) ခု၊ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနှင့်ကျောက်တစ်လုံး၊ အပိုင်းအစတစ်ခုနှင့်ကျောက်တုံးနှစ်လုံးထက်မပိုပါကအပြီးသတ်အမြင့်ဆုံးရွေ့လျားမှုဆယ်ကြိမ်အပြီးတွင်နောက်ဆုံးချည်နှောင်ခြင်းကိုစဉ်းစားရမည်။
မိဖုရားနှစ်ပါး၊ မိဖုရား၊ ကျောက်၊ မိဖုရားအရာကိုနှုတ်သောကြောင့်၊ အများဆုံးငါးလှမ်းပြီးနောက်လည်စည်းစဉ်းစားသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အတွက်အောင်ပွဲ နှင့်အကျိုးဆက်အခြားများအတွက်ရှုံးနိမ့်။
79. လည်စည်းတစ်ခုပေါ်လာလျှင် -
အဆိုပါမိတ်ဖက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်ကကြေညာ။
ပုဒ်မ ၆ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုကျင့်သုံးခြင်း။
80. ပုဒ်မ ၂.၆ အရ ၁ မှ ၅၀ ကိုကနုတ်ခြင်းအားဖြင့်အပိုင်းအစများ၏ရွေ့လျားမှု၊ လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ရွေ့လျားမှုကိုအနက်နှင့်အဖြူနှစ်မျိုးလုံးနှင့်ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
အပိုင်း၏အစအိမ်နံပါတ်နှင့်အပိုင်း၏အစအိမ်နံပါတ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
အဲဒီနံပါတ်နှစ်ခုကိုမျဉ်းရှည်တစ်ချောင်းနဲ့လိုက်သွားတယ် (-) ရိုးရှင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွက်။
နံပါတ်များကိုယူလျှင်သူတို့ကတစ် ဦး အားဖြင့်ကွဲကွာလိမ့်မည် (x) အဖွဲ့.
ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ခြင်း (သို့) အားကောင်းသောလှုပ်ရှားမှု!
83. ကစားပွဲတစ်ခုတွင်ကစားသမားတစ် ဦး စီကတာဝန်ရှိသည်ဟုသဘောတူနိုင်သည် အချိန်ကန့်သတ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအချို့အရေအတွက်ကလုပ်ပါ။
ပြိုင်ပွဲအတွက်အထူးနာရီကို ၀ တ်ဆင်ပါ။
ပြောင်းရွေ့ပြီးနောက်မှတ်တမ်းပြောင်းပါ, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူနှစ် ဦး စလုံးအဘို့, ဂိမ်း၏အပြည့်အဝသင်တန်း။
86. ဤကိစ္စတွင်ပြိုင်ပွဲဝင်နာရီတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် မှတ်စုတစ်ခုမလိုအပ်ပါ။